China High Pile Mepere obosara Jacquard Knitting Machine Nlụpụta na Ụlọ ọrụ | Igwe Morton
Ịchọrọ ịchọta onye nrụpụta akwa Pile Open Width Jacquard Knitting Machine maka ihe akwa chọrọ?
Anyị nwere ike ịnye igwe kwụ ọtọ dị elu nke nwere oghere mepere emepe Jacquard Knitting Machine ka ọ dabara na mkpa gị kacha mma.
1.Iji ugbo elu aluminom alloy na akụkụ nke igbe cam.
2.Otu Stitch Ndozi
3.nke Archimedes dị nkenke.
4.ọdịdị ịkpụ kam na agịga agịga, dị mfe maka ngbanwe igwe, nwere ike idozi nsogbu ọdịnala dịka oke ogologo ogologo ogologo, ụdị adịghị mma nke ikpo dị elu na nke dị ala, oke ọkpụrụkpụ, mmetụta ihicha ọjọọ.
5.High ikpo nwere ike na-arụ ọrụ na otu igwe na mid-high speed RPM, mmepụta nwere ike ịbụ 20% karịa site na ndị asọmpi ndị ọzọ.
9. Igwe dị elu mepere emepe Jacquard knitting machine bụ ọpụrụiche pụrụ iche dabere na teknụzụ ọkachamara nke Jacquard Cut Pile Knitting Machine yana ya gụnyere ọrụ niile nke igwe tube, yana inwe mkpụrụedemede na-abụghị. Igwe na -anakwere CAD iji mee ka ọrụ igwe rụọ ọrụ karia na akwa na -abụ ọkachamara na nkenke.
Igwe a dabara na ihe ndị a kpara akpa dị ka usoro silk fiber, owu, ajị anụ dị ọcha na eriri kachasị mma. Ogologo ikpo nwere ike ime 35-60mm. Uwe akwa isi awọ nwere okpukpu abụọ ga -abụ akwa abụọ ogologo ogologo isi awọ site na iji mma dị na igwe na -egbutu ya, ya na egwuregwu nke ikpo siri ike na ikpo mma na jacquard, nwere ike bụrụ akpụkpọ anụ atụrụ mara mma ma dị iche iche ma ọ bụ zoo ụdị akwa akwa. A na -etinye ha n'ọrụ na akwa, akwa, akwa, ihe ụmụaka ji egwuri egwu, akwa sofa, kapeeti, blanketị na ihe mkpuchi ụgbọ ala wdg.
Nke gara aga: Lower Loop Cut Open Obosara Jacquard Machine
Osote: Single Jersey Knitting Machine